गृहमन्त्री ज्यू, कहिले एक्सन चाल्ने ?
२0७४ श्रावण ९ सोमबार | ०६:१७:५४ Toggle navigation home
प्रवासबाटै संगितमा निशानेपाल तरुण दल महाधिवेशन : 'खड्काले रन्किदै भने मेरो टिम यो हो'सिटी एक्सप्रेस कहिले पर्छ छानबिनमा ? यस्ता छन् मालिकका कर्तुतलोक गित सुन्दा सुन्दै खानै विर्सिन्थे - तिर्थहारको झोंक फेर्दै पौडेल ! पाँच हजार झण्डा र तीन हजार प्रतिवेदन पोखरामायसो गरे कसो होला ? ५४अर्व नतिरे एनसेलको सेवा बहिष्कार !सगरमाथा यातयातले ल्यायो छुटमा अशोक लेलैण्डका बसहरुगायक एबं मोडल बिशुले ल्याए सुटुक्क थाहैनपाई सजाए छुदसैंअघि नै केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउनेसेनामा नयाँ चलखेल गृहमन्त्री ज्यू, कहिले एक्सन चाल्ने ?
काठमाडौं, १४ मंसिर । पछिल्लो समय डोल्पामा मुर्ति चोरीको श्रृखंला बढेको छ । डोल्पाको सात गाविसमा ५० वर्ष अघि देखि रहेका विभिन्न गुम्बाहरुका अत्यान्तै मुल्यवान, पुराना मुर्ति चोरी भएपनि यतिबेला जिल्लाबासी धेरैनै चिन्तामा परेका छन् ।
जिल्लामा मुर्ति चोरीेसँगै स्थानीयबाशिन्दा र पुजारीमाथी आक्रमण बढेपछि जिल्लाबासी झनै त्रसित बनेका हुन ।
यस्तो छ मुर्ति चोरीको श्रृखंला
सन् २००५ मा याङजेर गुम्बाबाट २८ थान पुराना मुर्ति, २००८ मा तिन्जे गाविसको सिमानामा रहेको गुम्बामा १ जनाको हत्या सहित मुर्ति चोरी भएको थियो ।
त्यस्तै २०११ साल्दाङ्ग र तिव्वतको नाकामा व्यापारी र गाउँलेलाई शक्तिशाली हतियार देखाई ९ करोडको हाराहारीमा लुटपाट भएको थियो । यस्तै, २०१२ धो र फोक्सुण्डोको सिमानामा करोडौंको लुटपाट,२०१३ मा तल्लो डोल्पामा सहरतारा गाविसको गुम्बाबाट बहुमुल्य मुर्तिहरुको चोरी भएको थियो ।
यस्तै २०१४ मा बधो गाविसको ढक्मार धेवा गुम्बाबाट ११ थान मुर्ति चोरी भएको थियो । यस्तै २०१६ को बैशाख महिनामा धो गाविसमा पर्ने गाकार गुम्बाबाट ४ थान बुद्धको मुर्ति लगायत पुराना मुर्ति एवं गहना चोरी भएको थियो । र स्थानीय माथी हातपात पनि भएको थियो ।
हालै दुई महिना अघि छार्का गाविसको बोन गुम्बाबाट १ थान मुर्ति चोरी र त्यहाँको लामामाथी हातपात भएको थियो । शैक्षिक तथा यातयात एवं विकासको पूर्वाधारबाट टाढा रहेको डोल्पामा पछिल्लो समय अपराध मौलाएको जिल्लाबासीको ठम्याई छ ।
सन् २०१६ को बैशाखमा धो गाविसको गाकार गुम्बा ८ छार्का गुम्बामा भएको चोरीमा संलग्न ७ जना हातहतिसहित पक्राउ परेका थिए । पक्राउमा परेकाहरुको बयान अनुसार उनीहरुले आफूले गरेको अपराध स्वीकारे । पक्राउ पर्नेमा डोल्पाकै साल्दाङ–८ हाल को –९ टक्सी गाउँका राप्के लामा थिए ।
उनले १९ थान विभिन्न गुम्बाका मुर्ति चोरी गरी आफ्नो घरमा लुकाएर राखेको र सो मुर्तिहरुको फोटो खिचि गैरकानुनी रुपमा विक्रिका निम्ति मोलमोलाई गर्ने गरेको प्रहरीको बयानमा बताएका छन् ।
अपराधीको घर खानतासी गर
जिल्लाबासीले अपराधीको घर खानतलासी गर्नुपर्ने बताएका छन् । पक्राउ परेकाको घरमा धेरैनै मुर्ति रहेको भन्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन ।
जिल्लाबसीले अपराधीको घरमा खानतलासी गरी उसलाई कडा भन्दा कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । उनीसँगै ठुलो मात्रमा चोरीको मुर्ति हुनसक्ने स्थानीयले आशंका छ । गृहमन्त्रीले यस विषयमा चासो दिई तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
एक निवेदनमार्फत उनीहरुले लामाका साथै अर्का मुर्ति चोरी गर्ने साल्दाङ गाविस – ५ का फरार अभियुक्त धावा थापालाई पनि पक्राउ गरि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
त्यस्तै, जिल्लाको शन्तिसुरक्षा कमजोर रहेको ठहर गदैं तत्काल शान्तिसुरक्षा कायम गराउन जिल्लाबासीले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । अन्य समाचार
एनसेलको लूटमाथि टावर फोर्ने देखि सेवा बहिष्कार गर्ने कता हराए ?कांग्रेसको नेतृतवमा देउवा की निधि ?देउवाको हातमा केसीको जीवन !गायक तिवारी भन्छन्,'बाचुन्जेल सांगीतिक छेत्रमा हिडिरहनेछु'संगीतमा रमाउदैँ हेमन्त !प्राण रहुन्जेल गीत संगीतमा जम्ने प्रण'उपसभापति भारतले मानेन भन्न लाज लाग्दैन्' ? ,सभापति देउवाज्यू !प्रवास भनेर काहाँ भो र ? गीत संगीत बिर्सन सकिदैन-सर्जक रत्न बुढाप्रवासबाटै संगितमा निशानेपाल तरुण दल महाधिवेशन : 'खड्काले रन्किदै भने मेरो टिम यो हो'सिटी एक्सप्रेस कहिले पर्छ छानबिनमा ? यस्ता छन् मालिकका कर्तुतलोक गित सुन्दा सुन्दै खानै विर्सिन्थे - तिर्थहारको झोंक फेर्दै पौडेल ! पाँच हजार झण्डा र तीन हजार प्रतिवेदन पोखरामायसो गरे कसो होला ? ५४अर्व नतिरे एनसेलको सेवा बहिष्कार !सगरमाथा यातयातले ल्यायो छुटमा अशोक लेलैण्डका बसहरुएनसेल प्रकरण, करोड खुवाएर अर्ब लुट्न चलखेलराजश्वका डिजी चुडामणि शर्माको उत्पात कहिले सम्म हो ?गायक एबं मोडल बिशुले ल्याए सुटुक्क थाहैनपाई सजाए छुदसैंअघि नै केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउनेएनसेल प्रकरणमा : ओली, देउवा परिवार र प्रचण्ड परिवारलाई पनि प्रलोभन देखाउँदै आचार्य दाजुभाइप्रशासन र बलियो नियामक नहुँदा एनसेलको राजएनसेल प्रकरण: राजस्व विभागले ठोस जवाफ नदिए पछि सीआईपी सम्मान रोकियोसेनामा नयाँ चलखेलगीत बिमोचनसगैँ यसकारण दङ्ग हट मोडल !एनसेलले ब्रान्डिङ सुरु गरे पनि कर विवाद झन बल्झदैगल्ती लुकाउन बाबुछोरालाई खोरमा !सेनामा नयाँ चलखेलआईजीपीको लागि अहिले देखि यस्तो दौड !प्रहरीमा सरुवाको दौड‘‘हलो हट्काएर गोरु चुट्ने काम एमालेले ... - काँग्रेसका नेता रामहरि खतिवडानेबिसघको नसकिँदै तरुणका नेता यस्तो रन्कोमाप्रभाबशाली नेता खड्का स्वदेश फिर्ता , विमानस्थलमा भव्य स्वागत featured video